YAAB: Carlo Ancelotti Oo Sirta Real Madrid U Dusiyey Liverpool Ka Hor Finalka Champions League - GOOL24.NET
YAAB: Carlo Ancelotti Oo Sirta Real Madrid U Dusiyey Liverpool Ka Hor Finalka Champions League
May 13, 2022 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa bixiyey sirta kooxdiisa ka hor finalka Champions League ee ay ku ballansan yihiin Liverpool dhamaadka bishan May.
Los Blancos ayaa magaalada Paris kula ciyaari doonta Liverpool 28ka May, waana ku celiska finalkii Kiev ee 2018 oo ay labadan kooxood koobka iskugu yimaaddeen markaas oo ay Real Madrid guushu ku raacday 3-1, iyadoo Loris Karius uu sameeyey qaladaad waaweyn xilli uu Gareth Bale laba gool dhaliyey.
Kooxda 13ka koob ee Champions League haysata ayaa waxay doonaysaa in markeedii 14aad ay ku guuleysato tartanka naadiyada Yurub marka ay laba toddobaad kaddib magaalada Paris ku kulmaan Liverpool.
Su’aalo badan ayaa ka taagan, sida Carlo Ancelotti oo afar Champions League ku guuleystay uu kooxdiisa ugu diyaarin doono finalka sannadkan iyo qaabka uu kula ciyaari doono Liverpool, hase yeeshee isaga ayaa sii bixiyey qish faa’iido u noqon kara Liverpool.
Ancelotti ayaa sheegay, in uu Liverpool kula ciyaari doono shax ka kooban 4-3-3, waxaanu sii xaqiijiyey qaar ka mid ah ciyaartoyda uu kusoo bilaabayo, taas oo Jurgen Klopp siinaysa fursad uu kusii dejiyo xeeladdii uu ku jabin lahaa Real Madrid iyo xiddigaha uu go’doomintooda ka shaqaynayo.
Tababaraha Talyaaniga oo la hadlayay wargeyska AS ayaa yidhi: “Mararka qaarkood way dhici kartaa in aanu ku ciyaarno 4-4-2, mana jiro nidaam noo go’an oo aanu ku ciyarno. Mararka qaarkood waxa muhiim ah cadaadiska sidii aanu samaynay kulankii City, adiga oo 4-3-3 kusoo bilowday ayaad isku rogi kartaa 4-4-1-1. Fikraddu isma beddesho, sida aan iskaga difaaci karto kooxda kale, cadaadisna aad u abuuri karto.”
Saddexda ciyaartoy ee khadka dhexe ee Casemiro, Toni Kroos iyo Luka Modric ayay hubaal tahay inay kusoo bilaaban doonaan haddii ay caafimaad qabaan, halak Federico Valverde iyo Edouardo Camavinga uu marar badan u isticmaalay inuu ka faa’iidaysto tamartooda badan.
Wargeyska AS oo wargeydiiyey su’aal kale ayaa waxa uu Ancelotti si lama filaan ah ugu muuqday in uu xaqiijinayo, in Rodrygo Goes iyo Rodrygo Goes ay kusoo bilaaban doonaan ciyaarta finalka, waxaanu yidhi: “Labaduba way ciyaari doonaan, waana run.”
Karim Benzema iyo Vinicius Junior ayaa lama taabtaan noqon doona, laakiin ciyaartoyga soo raacaya ayaa uu Ancelotti u kala dooran doonaa Rodrygo Goes iyo Federico Valverde, inkasta oo waraysigiisa uu ku xaqiijiyey in labaduba ay ciyaari doonaan.